Ividiyo yakutshanje evela eApple Park isibonisa ukuba uqhubeka njani umsebenzi ebusuku | Ndisuka mac
Ukuphela kwale nyanga, abafana baseCupertino baya kuqala ukufudukela kumaziko amatsha eApple Park, inyathelo eliza kuthatha iinyanga ezintandathu ukugqiba, ngelixa yonke imisebenzi esenziwa namhlanje igqityiwe kwinto entsha izibonelelo. Imisebenzi iyaqhubeka ukuqhubela phambili ngesantya esihle, kodwa ngokuchasene newotshi yokunika amandla okugqibela kwikomkhulu elitsha, ngaphakathi nangaphandle. Namhlanje sikubonisa enye ividiyo entsha apho sinokubona imeko yangoku yemisebenzi kunye nendlela imisebenzi iyaqhubeka ukwenziwa ebusuku, ngaphandle kokuma nangaliphi na ixesha.
Eyona nto ibalulekileyo kwindawo ezijikeleze amaziko amatsha kukunqongophala kwezityalo, uhlaza oluye lwakwazi ukushiya lonke ilizwe laseCalifornia ne-Oregon ngaphandle kwemithi. I-Apple iceba ukutyala imithi engama-3.000, kodwa okwangoku abo baphethe igadi bayakwazi ukwenza ngaphezulu kweeyunithi ezili-1.000 10.000, iiyunithi ezikummandla weemitha zesikwere ezingama-XNUMX XNUMX kufutshane nezixhobo ezitsha zeApple.
Kule vidiyo yokugqibela singafumana uluvo lokuba ukukhanya kwezi zixhobo zitsha kuya kuba njani, kokubini ngaphandle kunye nokukhanya kwangaphakathi kwendawo ebiyelweyo, kodwa ukuba sithathela ingqalelo ukuba imisebenzi ayikagqitywa, umbono umele kuphela. Sikwabona imeko yendawo yokupaka ibekelwe abasebenzi, indawo ethathe indawo ebaluleke kakhulu kumaziko angaphandle antsonkothileyo. Ukusukela ngoFebruwari ophelileyo, siyazi ukuba le Khampasi intsha izakubizwa ngokuba yiApple Park kwaye iholo lababekho eliliwaka liza kubhaptizwa ngegama likaSteve Jobs. Ukuba ufuna ukubona ukuba imisebenzi iqhubele phambili njani namhlanje, ndiyakumema ukuba ujonge le vidiyo intsha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Ividiyo yakutshanje yeApple Park isibonisa indlela oqhubeka ngayo umsebenzi ebusuku
I-Apple yazisa nge-Apple Watch i-NikeLab, i-Exclusive Apple Watch Strap